सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोलि लागेर एकको मृत्यु। | रेडियो झापा 100.7 MHz.
सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोलि लागेर एकको मृत्यु।
रेडियो झापा 100.7 MHz. बिहिबार, भाद्र ११, २०७७ १०:३४:४८
११ भदौ, झापा । सशस्त्र प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएपछि प्रहरीले गौहत्याको अभियोगमा पक्राउ परेका दुई जना अभियुक्तलाई छाडेको छ ।
झापा गाउँपालिका–३, कटुवामारीमा गोरु काटेको अभियोगमा दुई जनालाई पक्राउ गरेर जिल्ला सदरमुकामतर्फ लैजाने क्रममा विवाद भएको थियो । त्यसक्रममा नेपाल प्रहरी/सशस्त्र प्रहरी र स्थानीयबीच झडप हुँदा स्थानीय ३८ वर्षीय रसिकुल आलमको मृत्यु भएको थियो ।
‘स्थितिलाई मथ्थर बनाउन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि छाडिएको हो’, थापाले बताए। झापा गाउँपलिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष मोतिलाल गणेशका अनुसार अहिले घटनाबारे स्थानीय जनप्रतिनिधि, पीडित पक्ष, प्रहरी र प्रशासनबीच छलफल गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
उनले भने, ‘मृतकलाई शहीद घोषणा गर्नुपर्ने, प्रहरी निरीक्षकलाई कारबाही गर्नुपर्ने जस्ता माग पीडित पक्षले राख्नु भएको छ । त्यसविषयमा छलफल हुन्छ ।’